Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer oo markale ka hadlay iibka Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 03 Maajo 2021. Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa markale ku celiyey in kooxda Manchester United aysan dooneynin inay lacag ka helaan iibka laacibkooda khadka dhexe ee Paul Pogba xagaagaan.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa galay sanadkiisii ugu dambeeyey ee qandaraaskiisa, waxaana bartilmaameedsanaya kooxo waa weyn oo ay horboodayaan Real Madrid iyo Juventus.
Wakiilka Pogba ee Mino Raiola ayaa shaaca ka qaaday dhammaadkii sanadkii hore in waayihii ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay ee garoonka Old Trafford uu soo dhammaaday, laakiin 28-sano jirkaan ayaa isku dayay inuu iska fogeeyo hadalladaas.
Inuu hoos u dhigo heshiis kordhin cusub ciyaaryahankii hore ee kooxda Juventus ayaa ku qasbi karta Man United inay iska iibiyaan laacibkan khadka dhexe dhammaadka xagaagan, inkastoo Solskjaer uu caddeeyay mowqifkiisa mustaqbalka Paul Pogba.
Markii la weydiiyey haddii ay kooxdu lacag ka heli doonto iibka laacibkan suuqa xagaagan haddii heshiis cusub la isku fahmi waayo, Solskjaer ayaa yiri: “Maya, dabcan maya.
“Waxaan had iyo jeer dhihi jiray Paul waan ku raaxeystaa maareyntiisa, waan ku raaxaystaa tababarkiisa, waan ku riyaaqaa lahadalkiisa, sidoo kale waan la dhacsanahay inaan la tartamo maxaa yeelay isagu waa guuleyste.
“Wuxuu doonayaa inuu fiicnaado sida uu haatan yahay, waana sababta uu wax u dhageysto, waxaad arki kartaa sidoo kale inuu halkan ku raaxeysanayo, wejigiisana dhoolla-cadeyn ayaa ka muuqata.” ayuu hadalkiisa ku daray Macallin Ole.
Pogba ayaa afar gool caawiyey gool kalena dhaliyey todobadiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu u saftay Kooxda Manchester United tartammada oo dhan.
RASMI: Kooxda PSG oo shaacisay liiska xiddigaha ay kala hortagayso Kooxda Man City ee Champions League... (Miyuu maqan yahay Mbappe?)